ပုဂံရာဇဝင်ထဲကပျောက်ဆုံးနေသောယာဥ်ပျံ(သို့)အလောင်းစည်သူမင်းကြီးရဲ့ ဖောင်စကြာ - UniqueZone Info
justin | September 3, 2021 | Knowledge, OMG | No Comments
ပုဂံမင်းဆက်များထဲတွင် အလောင်းစည်သူမင်းသည် အလွန်ဘုန်းကြီးသော မင်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ ခမာနဲ့ထိုင်းတို့က အလောင်းစည်သူမင်းကို နတ်ဘုရားတစ်ပါးလို့တင်စားကြပါတယ်။ အလောင်းစည်သူမင်းကြီးဟာ တိုင်ခန်း လှည့်လည်တဲ့အခါမှာ ဖောင်စကြာဆိုသည့် ယာဉ်ပျံကို အသုံးပြုကာ လှည့်လည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အလောင်းစည်သူမင်း နတ်ရွာစံပြီးနောက်မှာတော့ ထို ဖောင်စကြာဆိုတဲ့ ယာဉ်ပျံအကြောင်းကို ရေးသားထားခြင်းကို မတွေ့ရှိတော့ပါဘူး။ ထိုဖောင်စကြာဆိုသည့်ယာဉ်ပျံမှာ အဘယ်သို့ရောက်ရှိသွားပါသနည်း ?
အလောင်းစည်သူမင်း၏သာသနာမှာ ဘုန်းကံကြောင့်ရရှိခဲ့သောဖောင်စကြာယာဉ်ပျံမှာ အလောင်းစည်သူမင်း နတ်ရွာစံချိန်မှာ ရုတ်တရက် ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းလား ?
ထိုအလောင်းစည်သူမင်း၏ ဘဝနေဝင်ချိန်မှာ အံသြဖွယ်ကောင်းလှသည်။ မိမိ၏သားအရင်းဖြစ်သော နရသူမင်း၏ ခေါင်းအုံးနှင့်ဖိသတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ နရသူမင်းသည် ဖခင် အရင်းကို ကိုယ်တိုင်သတ်မိသည့်အတွက်ကြောင့် မိမိ၏အပြစ်ကိုဆေးကြောရန်အတွက် ထုထည်ကြီးမားလှသော ဓမ္မံရံကြီး ဘုရားကို အကြီးအကျယ်တည်ဆောက်စေသည်။
အုတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြား အပ်ထိုးလို့မရအောင် တည်ဆောက်စေသည်။ ထိုနောက်ဓမ္မရံကြီးဘုရား၏ အတွင်းဘက်အခန်းနံရံများအား အသေပိတ်ပစ်စေပြီး ထိုအခန်းများအား တာဝန်ယူတည်ဆောက်စေသော ဗိသုကာပညာရှင်များအားလည်း နှုတ်ပိတ်သည့်အနေဖြင့် သေဒဏ်ပေးသည်။
ဓမ္မရံကြီးဘုရားသည် မြန်မာသာမက ကမ္ဘာကျော်သောဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်။ ထိုအပြင် အာကာသပညာရှင်များအား စိတ်ဝင်စားစေသော ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်။ ဓမ္မရံကြီးဘုရား၏ တည်ဆောက်ပုံသည် အီဂျစ်ဘုရင်များ တည်ဆောက်ခဲ့သော ပိရမစ်များနှင့် များစွာဆင်တူသောကြောင့် အီဂျစ်တို့၏ ဗိသုကာပညာနှင့် ပုဂံနိုင်ငံသားတို့၏ ဗိသုကာပညာသည် ဆက်စပ်မူရှိနိုင်သည်ဟု အာကာသသိပ္ပံပညာရှင်များ ရှေး ဟောင်းသုတေသနများက မှတ်ချက်ချကြသည်။
ထို့အပြင် အီဂျစ်တို့ကိုးကွယ်သော နတ်ဘုရားတံဆိပ်များ နဂါး များအား ပုဂံဘုရားအချို့၌တွေ့ရှိရမှုနှင့် တစ်ချိန်ကပုဂံဒေသကကိုးကွယ်ခဲ့သော နတ်နဂါးအရည်းကြီး ကိုးကွယ်မှုတို့သည် ဘုံဝါဒ တစ်ခုတည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ထင်ကြေးပေးကြပြီး သုတေသနများလုပ်ကာ ရှာဖွေကြသည်။ ထို့အပြင် ပုဂံဒေသကဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အဦးတို့သည် အရည်းကြီးတို့၏ သာသနာနိက အဆောက်အဦးများဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပုဂံမင်းဆက်ပေါင်းများစွာအပေါ် အုပ်စိုးခဲ့သော အရည်းကြီးသာသနာသည်ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားလာချိန်တွင် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သော်လည်း သက်သေပြစရာအဖြစ် နတ်ရုပ်များနဂါးရုပ်များနှင့် အရည်းကြီးတို့ကိုးကွယ်သော နတ်ဘုရားကျောင်းမှာ အဘယ်ကြောင့် မကြွင်းကျန်ရစ်သနည်း။
သမိုင်းသုတေသနအချို့က ထိုနတ်ဘုရားကျောင်းများအပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့က ပြန်လည်မွန်းမံဖြည့်စွက်ပြီး ဘုရားစေတီ တည်ခဲ့သည်ဟု ယူဆကြသည်။
( ဤအယူအဆမမှန်နိုင် ) ဓမ္မရံကြီးဘုရားအား အာကာသ သိပ္ပံပညာရှင်များ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားသွားစေသည့်အချက်မှာ နာမည်ကျော်အာကာသ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် နာဆာအဖွဲ့အစည်းထံမှ လျို့ဝှက်စွာပေါက်ကြားလာသော ဓါတ်ပုံများထဲတွင် ဓမ္မရံကြီးဘုရားဓါတ်ပုံလဲ ပါဝင်လာသည်။
ထိုဓါတ်ပုံကြောင့် အာကာသသိပ္ပံပညာရှင်များမှာ ဓမ္မရံကြီးဘုရားအား ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့သည်။ ဓမ္မရံကြီးဘုရားသည်လည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလောက်အောင် ပဟေဠိများနှင့်ပြည့်နေသည်။ နရသူမင်းသည် အဘယ်ကြောင့် ဘုရားအတွင်းဘက်ခန်းရှိနံရံများအား အသေပိတ်ပစ်စေခဲ့သနည်း?
တာဝန်ယူတည်ဆောက်သော ပန်းရံပညာရှင်များ အဘယ်ကြောင့် နှုတ်ပိတ်ပစ်စေခဲ့သနည်း ?
သုသေသနသမားများ ရတနာသိုက်မုဆိုးများ၏ ပြောကြားချက် များ၌ ဓမ္မရံကြီးဘုရား၏ ဌာပနာတိုက်သည် သာမန်ဘုရားများ၏ ဌာပနာတိုက်ထက် အလွန်ကျယ်ဝန်းသော အခန်းနှစ်ခန်း ဖြစ်ပုံရပြီး တစ်ခန်း၌ အလောင်းစည်သူမင်း၏ ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်ရတနာများ ဌာပနာထားပုံရသည်ဟု ထင်ကြေးပေးကြသည်
ထိုပညာရှင်များ၏ မှတ်ချက်အရ အလောင်းသည်စည်သူမင်း ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများထဲတွင် ဖောင်စကြာယာဉ်ပျံလဲ ပါနိုင်လောက်သည်။ အလောင်းစည်သူမင်းသည် မဟာသမုဒ္ဒရာအား သွားရာ၌ ဖောင်စကြာဆိုသည့် ယာဉ်ပျံအားအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုဆိုရာတွင် ယခုခေတ်တွင် မဟာသမုဒ္ဒရာအား စကြာဝဠာဟု သတ် မှတ်လျင်အလောင်းစည်သူ မင်း၏ဖောင်စကြာဆိုသည်မှာ အာကာသယာဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပေသည်။
ထိုအယူအဆအား ထောက်ပံပေးနေသည်မှာ UFO များနှင့် Alien တို့အကြောင်းအား အသည်းအသန်လေ့လာနေသော နာဆာအဖွဲ့အစည်းထံမှ ဓမ္မရံကြီးဘုရားအား ရူထောင့်အမျိုးမျိုးက ရိုက်ထားသော ဓါတ်ပုံများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ပုဂံဒေသ ဘုရားစေတီများအပေါ်၌ ပျံဝဲနေသော UFO ယာဉ်ပျံအချို့အကြောင်း ပုဂံဒေသ၏ ဘုရားစေတီအချို့သည် အာကာသသီအိုရီများ Alien Theory များနှင့် ဆက်နွယ်မူရှိသည်ဟု ကောက်ချက်ချနိုင်ပေသည်။
ထို့အပြင် ပုဂံဒေသဘုရားစေတီများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ကွင်းပြင်အကျယ်ကြီးများ၊ ပုဂံဘုရားအချို့အား လူတစ်ရစ် နတ်တစ်ရစ် တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟူသော အယူအဆများ၊ နာဆာအဖွဲ့အစည်းထံမှပုဂံဘုရား အချို့၏ဓါတ်ပုံများကြောင့် ပုဂံဒေသသည် UFo များ Alien များနှင့်ပတ်သက်မူ ရှိခဲ့လေ သလားဟု ယူဆရသောသက်သေများဖြစ်သည်။
လိုက်လံတောင်းစားနေသည့် အိမ်ခြေရာမဲ့တစ်ဦးကို ကူညီးရင်းဖြင့် ဘဝအကြောင်းကို မေးမြန်းကြည့်ရာမှ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်နေမှန်း သိခဲ့ရ
နယ်ဝေးရပ်ခြားတွင် ၃နှစ်အကြာ အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့ပြီး ပြန်လာချိန်မှာတော့ ချစ်သူကောင်လေးမှာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနှင့် မင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသော မိန်းကလေး